Home STARS EUROPEAN Luka Modric tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny Genius mpilalao midadasika fantatra indrindra amin'ny anarana; "Lucky Luka". Ny tantaram-pitiavan'i Luka modric tantaram-piainana mihoatra ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao nanomboka tamin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony, saingy vitsy no mieritreritra ny tantaran'i Luka Modric izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Luka Modric tantaram-pitiavam-bahaolana mihoatra ny fitantarana momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
Luka Modrić dia teraka tamin'ny andro 9 tamin'ny 1985 tamin'ny volana septambra tao Zadar, Kroasia.
Teraka tao amin'ny fianakavian'ireo mpitsoa-ponenana nandositra ny mpanohitra Serba nandritra ny ady tany Bosnia. Ny radojka Modrić, mama Radomka Modrić dia mpanasa lamba ary mpanohana an'i Stipe Modrić, mpanamboatra milina an-tapitrisany manamboatra fiara ho an'ny miaramila Kroatiana amin'ny ady.
Luka nandritra ny androm-piainany dia niaina ny hetsika mahatsiravina tao Zadar nandritra ny Ady Krany.
Io ankizilahy io no nampiakatra ny baolina manodidina ny toerana fiambenan'ny hotely isan'andro, " dia ny tenin'ny mpitarika NK Zadar Josip Bajlo raha naneho hevitra momba an'i Modric tany am-piandohany. "Maivana sy kely tokoa izy nandritra ny taonany, kanefa afaka nahita ianao avy hatrany fa nanana zavatra niavaka taminy izy."
Nitsara tsy tapaka i Luka noho ny vatany kely. Heverina ho kely sy malemy izy ary olona tsy te-hitombo ho an'ny mpilalao baolina kitra. Afaka matoky isika fa ho mpilalao lehibe izy. Na izany aza, ny baolina dia 'tsara eo amin'ny tongony' tahaka an'i Luka nifantoka tamin'ny filalaovana manokana teo anoloan'ny efitranon'ny hotely fianakaviany.
Ny hany fomba ahafahany manamarina raha mendrika ny hilalao baolina kitra izy dia ny handehanan'ny fitsarana tanora. Ny fahafaha-tonga dia navoaka tamin'ny famintinana ny asa.
Luka Modric tantaram-pitiavam-bahaolana mihoatra ny fitantarana momba ny tantaram-piainana -Career Summary
Luka aloha ny fitsarana an'i Hajduk Split. Indrisy, araka ny nolazain'ny olona, ​​dia nolavin'i Hajduk Split izy noho ny tsy fisian'ny toetra ara-batana takiana.
Mbola tsy mazava mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity taranaka ity izay nanova ny tantarany. Mbola fanambarana fa i Luka dia natokana ho mpilalao ambony indrindra. Nanintona ny heriny rehetra i Young Luka mba hiasa mafy. Nanitsy ny fihetseham-pon'ny olona izy taorian'izay fa malemy sy kely izy. Izany dia tonga tamin'ny fotoana nahazoany ny antsoin'ny olona "Fahombiazana tery" tao Dinamo Zagreb. Izy io dia faly manomboka amin'ny asany.
Modric, raha vantany vao niditra ny klioba dia naneho finoana sy hatsarana maro. Dinamo Zagreb dia nanitatra haingana ny fifanarahany hatramin'ny folo taona. Nanana fitomboana miadana sy maharitra foana izy rehefa avy nihinana fanafody maro avy amin'ny mpiasan'ny klioba.
Ho fanamafisana ny traikefa bebe kokoa, dia navoaka ho an'i Zrinjski Mostar i Luka taorian'ny nilalaovany ny Dinamo Zagreb. Ity dia teboka iray izay nalehany nandritra ny asany. Nanan-kery koa izy tao amin'ny Inter Zaprešić any Bosnia.
Taorian'ny fahamatorana betsaka, dia niverina izy ary nanao ny laharam-boninahitra ambony indrindra ho an'i Dinamo ao amin'ny 2005. Nahazo ny lisitry ny ligy latsak'ankehitriny izy sy ny baolina anatiny miaraka aminy. Luka dia nantsoina hoe Prva HNL Player of the Year tao amin'ny 2007.
Tao 2008 dia nifindra tany amin'ny club premier league izy Tottenham Hotspur, izay nitarika ny Spurs ho an'ny UEFA Champions League voalohany azy efa ho ny 50 taona, nahatratra ny ampahaefatry ny fifaninanana 2010-11.
Taorian'ny vanim-potoanan'ny 2011-12 dia nifindra tany izy Real Madrid ho an'ny vidin'ny £ 33 tapitrisa. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Luka Modric tantaram-pitiavam-bahaolana mihoatra ny fitantarana momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny fianakaviany dia niharan'ny ady tao Bosnia. Nandany ny fiainany nandositra ireo mpanohitra Serba izy ireo. Ny tsy fisian'ny trano, akanjo vitsivitsy sy trano fialofana no nahatonga ny fianakaviany ho malahelo nandritra ny vanim-potoana nipoitra. Vetivety dia niova ny fiarahamonin 'ny mpitsoa-ponenana mahantra raha vantany vao nahazo ny rain'i Luka Modric, i Stipe Modric dia nahazo asa mendrika ho an'ny mpahay milina Krôata.
Tamin'izany fotoana izany, ilay Dadabe Luka izay nantsoina koa hoe Luka, dia miaramila iray izay niady tamin'ny fampifandraisana tanàna lehibe. Ny fiainany dia natahotra toy ny Serbian Army, the JNA and the army of the “Krajina” carry out intensive fightings and military activities in his zone. Grandfather Luka was killed by his enemies.
Taorian'ny nahafatesan'i Luka sy ny fianakaviany dia nifindra tany Zadar. As soon as they left, they immediately lit their house in fire – says Stanko Modric, a close relative of the Modrić family. At Zadar, they settled in a cheap hotel, thanks to monies made by Luka’s father, Stipe Modric who still remains an expert mechanic. Stipe continued his mechanic job at Zadar. He provided for his family, thus making them move above the poverty line to a higher middle-class family background. It was a Zadar that Luka started playing football as stated earlier.
Isaorana ny Career Luka, ny fiainana ho an'ny fianakavian'i Modric na dia eo aza ny ady sy ny tsy fahampian-tsakafo velom-ponenana. Izy ireo dia feno harena feno noho ny an'i Luka.
Luka Modric tantaram-pitiavam-bahaolana mihoatra ny fitantarana momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Ny tantaram-pitiavan'i Luka Modric dia mifototra amin'ny vehivavy iray antsoina hoe Vanja Bosnić.
Nanomboka nampiaraka tamin'ny 2006 izy ireo, nandritra ny famerimberenana azy niverina tany Dinamo Zagreb. Nataon'i Luka azy ny solontenany raha vantany vao nahatsapa ny fitokisana feno sy ny fahatokisany azy amin'ny maha-vehivavy ny nofinofiny.
Vanja Bosnic no vehivavy matanjaka ao ambadik'i Luka Modric. Izy no atidoha tao ambadiky ny ady nifanaovan'i Luka izay nahatonga ny fifindrana azo avy amin'ny Tottenham ho an'i Real Madrid.
Luka Modrić dia mbola tia ny masony maitso (jereo etsy ambony), tarehy tsara tarehy, avo sy lava mainty tsara tarehy, araka ny hita etsy ambany.
Luka Modric vadiny
Shy Modrić dia nanambady an'i Vanja Bosnić tamin'ny volana Mey 2010 tao Zagreb renivohitra Kroaty taorian'ny efa-taona nifanarahana. Ny mpiara-miasa aminy tamin'io fotoana io, Vedran Ćorluka, no lehilahy tsara indrindra.
Sary Wedding Luka Modric
Ny fanambadian'izy ireo dia notahina haingana tamin'ny vokatry ny kibo. Ny zanak'izy ireo voalohany, Ivano, dia teraka tamin'ny 6 June 2010. Ny zanany vavy, Ema, dia teraka tamin'ny 25 April 2013. Ny zanany vavy faharoa, Sofia, dia teraka tamin'ny 2 October 2017.
Modrić dia miaina ny fiainam-pianakaviana mangina amin'ny ankapobeny, noho ny fiantombohany manetry tena. Mino izy fa tokony ho mpilalao baolina kitra izy fa tsy olo-malaza na modely.
"Miezaka fotsiny aho manao izay tsara indrindra vitako amin'ny kianja filalaovana. Tsy modely na zavatra aho. Mpilalao baolina kitra aho, " Ireo teny ao amin'ny Real Madrid Legendana izay nanongotra ny tongony tamin'ny tany. Ny hany zavatra manoatra noho ny baolina any Luka dia ny fianakaviany. Ho azy, momba ny roa F's- Football and Family.
Luka Modric tantaram-pitiavam-bahaolana mihoatra ny fitantarana momba ny tantaram-piainana -FARE's 'Euro 2016 Refugee XI
Mazava ho azy fa tsy irery fotsiny ny modric tamin'ny fandrosoana noho ny fitsapana ary ny fahasarotana ho lasa mpilalao baolina kitra lasa izy. Ny hafa mpilalao baolina kitra izay hita etsy ambany dia mpitsoa-ponenana ihany
Vao haingana, ny tambajotram-baolina fanoherana fanavakavahana fantatra amin'ny hoe 'Fare' dia nametraka andianà mpilalao mpitsoa-ponenana taloha ho fankalazana Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitsoa-ponenana.
Ny ekipa koa dia nampidirin'ireo rahalahy granita ary Taulant Xhaka, Christian Benteke, Nani ary Modric.
Izy ireo dia heverina ho mpandray anjara mavitrika eran-tany izay mamela ny zava-drehetra mba hankalaza izany Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitsoa-ponenana.
Luka Modric tantaram-pitiavam-bahaolana mihoatra ny fitantarana momba ny tantaram-piainana -Nankalazain'i Ronaldo hatramin'ny fahatanorany izy
Modric nanana toerana malefaka, fa tsy CR7, fa aleo aloha Ronaldo Luis Nazario de Lima. Niteny ny Kroaty indray mandeha ...
"Nihalehibe ny poketrany voalohany, dia nanana sarin'i Ronaldo tamin'izy ireo. Izaho dia vokatra Nike ary tiako izy ireo. Tiako i Ronaldo. Ilay Ronaldo tranainy! Ary nitondra an'ireto valopy ireto nandritra ny taona maro aho. Nanomboka tamin'izaho mbola zazakely kely aho raha nanomboka nilalao tamina mpilalao baolina tao amin'ny Ligy Bosniaka. Nirotsaka be ny ranomasoko alohan'ny nanomezako azy ireo ho an'ny olona iray. "
Angamba avy amin'ny Ronaldo Breziliana fa Modric dia nianatra ny fomba hanamafisana ny fahaizana miasa.
Luka Modric tantaram-pitiavam-bahaolana mihoatra ny fitantarana momba ny tantaram-piainana -Rehefa lasa manontolo ny White Hart Lane
Nanafotra ny fiainana tamin'ny farany tamin'ny fiainan'i Modric tamin'ny fomba feno fitiavana tany amin'ny renivohitra espaniola. Izy izay dia Tottenham izay mbola nalahelo ihany koa momba ireo zava-nitranga izay nanara-dia ny lefom-pitaovan'ny Espaniola goavambe.
Ny Kroaty izay niala tao amin'ny klioba any Londres dia somary hafahafa kokoa noho ny roa tonta. Izany no tena nitranga. Tamin'ny fahavaratry ny 2012 dia nanazava i Modric fa naniry ny hifindra izy Real Madrid fa Tottenham Azo atao angamba ny manaiky fa tsy mety ny miala amin'ny kintany.
Mazava ny klioba fa tsy maintsy mandoa vola i Madrid £ 40 tapitrisa mba hiantohana ny serivisy ary, miaraka Tottenham nanakana tsy an-kijanona ny hetsika, dia nandà tsy hampiofana i Modric, izay midika fa ny Andre Villas-Boas sy ny orinasa dia tokony hanatsara ny karamany roa herinandro izay navoakan'ny £ 80,000. Nandoa izany izy ary tsy nety nampiofana. Izany no fotoana Tottenham dia nandao sy nandefa ny famindrana.
Modric dia nametraka ny fitaovana ho £ 30 tapitrisa nefa ny lolom-po dia nandany ny Tottenham mahatoky.
Luka Modric tantaram-pitiavam-bahaolana mihoatra ny fitantarana momba ny tantaram-piainana -Izay ho tsaroany
Ho tsaroan'i Luka mandrakizay ireo toetran'ity manaraka ity rehefa hiverina izy.
Satria izy no mpilalao baolina kitra ambany indrindra amin'ny andro maoderina indrindra.
Ho an'ny fahaiza-manao maimaim-poana sy mahatalanjona.
Noho ny fahitana lehibe nataony teo amin'ny toerana.
Satria afaka manova ny lalan'ny lalao miaraka amin'ny lavadrano sy solo, ezaka maharitra.
Satria afaka milalao miaraka amin'ny fefy.
Ho an'ny fampisehoana haingana sy manelingelina ny baolina.
Noho ny fahaizany mamela ny baolina amin'ny toerana lava sy lava.
Farany, satria tompon'ny 'Pre-hanampy'.
Miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra tsy mety tsara ianao, Mifandraisa aminay!
Kroaty Football Diary
DENI Oktobra 23, 2018 Ao amin'ny 12: 42 am
IZAY LAZAIN'NY BAIBOLY dia LYKA A CROATIAN ARAKA ANY AMIN'NY FITIAVANA ARA-PANAHY ary TSY MISY VEHIVAVY NY FITIAVANA. MAHAFANTATRA NY FAHAMARINANA IREO FITIAVANA IREO GRANDDAD AMIN'NY VONINAHITR'I MADAGASIKARA TAMIN'IZAO TONTOLO IREO SERBIANINA AO AMIN'NY TANTARA. MISY SERBIANINA SY NY MOTOSY SY NY MOMBA NY ZAVA-DEHIBE INDRINDRA AMBONY AMIN'NY FITIAVANA MAMONJY NY FIANAKAVIANA NY FIANAKAVIANA NY FIANAKAVIANA TAMIN'NY FANJAKAN'I KRISTY. Ny serba KRAJINA dia naneho hevitra momba ny fiarahamonina Serba ary nilaza fa ny AREMA KRISTIANINA AMIN'NY TONTOLON'ANDRIAMANITRA AMIN'NY 90S dia namono mihoatra ny antsasaky ny tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa sy ny isan-jaton'ireo jiosy sy ROMA GYPSY. MALAGASY TSY MISY IREO OFISIALY SY FAMPIANARANA IRAISAM-PIRENENA MALAGASY MISY IZANY IREO MALAGASY MALAGASY EO AMIN'NY TONTOLOANA IZAO TONTOLO ITY MIVAVAKA AMIN'NY SERASERA SERBIAN SERNA KANJINA SY REPUBLIK OF SRPSKA. ANY AMIN'NY LAMESA LUKAS UNKL AMIN'NY MOTHER ANY AMIN'IZAO FIANARANA AVY AMIN'ITY FAHAMARINANA KRISTIANINA AO AMIN'NY ARMY REPOBLIKAN'I SRPSKA CRAJINA. NAMPIASA NY ANARAN'ANDRIAMANITRA KROATIENAN'I KRISTY I SERBIAN KRAJINA LUKAS RELATIVES TAMIN'NY RENY MANDRESY MANDRAKIZAY MANDRITRA NY SERIBIA MISY OLONA AMIN'NY OLONA MALAGASY 40 MISY MAHAFANTATRA NY OLONA TSY MANAIKY NY FOMBA FIJERINTSIKA NY FIAINANA MANDRAKIZAY ao SERBIA. NITOVY NY OLONA ITY TAMIN'NY 40 TSY NIVADIKA IZANY. I LUKA dia MPANJAKA LEHIBE IZAHAY TIA ANAO OLONY NY FITIAVANA SY NY FIVAVAHANA NY FANDAMINAN'I GRANDDAD. TSY MISY TSY MISY TSY MISY OLONA TSY MISY IZAY TSY MISY TSY MISY IZAY TSY MANAIKY NY FAHAMARINANA NY FAHAMARINAN'NY VONINTSIKA MOMBA NY MALAGASY dia TSY MISY OLOM-PIRENENA MOMBA NY OLOMBELONA SY TSY MISY NY FAHAMARINAN'IZAO TONTOLO IZAO. NY FITIAVANA SY NY FITIAVAN-TENY AMIN'NY BIASY dia TSY MISY ANTSIKA NY FIANGONANA MIAVAKA NY FAHAMARINANA.
DENI Oktobra 23, 2018 Ao amin'ny 1: 17 am
Ny zavatra hafa dia mampalahelo raha tsy maintsy manafina ny fiaviany izay ray aman-dreny na ray aman-dreniny ny olona ao Kroasia izay fireneny sy kolontsainy. Ny fiteny dia manova tsy tapaka ho hafa noho ny serba, ankizy Bosniaka any an-tsekoly, ny zaza kamboty dia voatery hiteny amin'ny governemanta tsy hoe ahoana no lazaina amin'ny ray aman-drenibeny na ny ray aman-dreny ao an-trano. Ny rehetra dia tia rehefa i Kroasia dia milalao manga sy fotsy. Fa i Kroasia dia nisafidy ny hanan-jiro ny loko mainty hoditra mainty sy maivana izay maneho ny tantaran'ny haizina tamin'ny lasa tamin'ny 1940 sy 1990. Ahoana raha te-milalao anaty akanjo mainty i Italia izay maneho ny lasa maizina amin'ny 40 izay tena mampalahelo. Olona maro no tsy mitonona raha i Kroasia dia milalao eny amin'ny akanjo mainty na mpanohana mahatoky na dia eo aza ny politika fa tsy tafasaraka amin'ny fanatanjahantena any Kroasia.
MANDRAY DANKY Jiona 9, 2019 Ao amin'ny 10: 51 am
Comment: LUKA MODRIC dia TSY MISY MPANJAKA tsara
Jona 3, 2017
Ivan Rakitic Tantara Mitantara Ny Zava-Bita Tsara Indrindra
Janoary 1, 2018